Masaajid Minnesota ku yaala oo markale la weeraray,burbur iyo khasaarana loo geystay -
Masjidka Darul Faruq oo ku yaalla magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota ayaa xalay la jabsaday, burbur iyo khasaarana loo geystay.
Masaajidkan xalay loo dhacay ee muraayadaha iyo qololka qaarkood la jajabiyey, khasaarahana loo geystay ayaa bishii August la qarxiyay oo bambo gacmeed lala beegsadday.
Bamka horay loogu qarxiyey masaajidka ayaa lala eegtay xafiiska Sheekh Waliid oo ah Imaamka masjidka, nasiib wanaag bamka lagu qarxiyey masaajidka ayaanan geysan dhimasho iyo dhaawac.
Haddaba jabsashaddan iyo khasaaraha marka kale loo geystay masaajidkan ayaa ku soo aadaysa xili ay maamulka masaajidku ay soo daayeen muuqaal cusub oo video ah oo tusaya khasaarihii iyo sidii uu u dhacay qaraxii bambadda ahaa.
Maamulka masaajidka ayaa sidoo kale warbaahinta u sheegay markii ay sii daayeen muuqaalka video-ga ah in ilaa iyo hadda qofna aan loo qaban, cadaaladana la horkeenin dadkii falkan xun ee argagixiso masaajidka u geystay.
Lama hayo wax akhbaar dheerah oo ilaa iyo hadda ka soo baxay ama ay soo saareen saraakiisha amniga ee iyagu waday baaritaanka la xiriira weerarkan Bambaano ee lagu qaaday masjidka Darul faruq.